डा. केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडाैँ, मंसिर ५ ।
स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि डा. गोविन्द केसीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । उनी दुई दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन सेन्टरमा उपचाररत थिए।
छातीमा समस्या देखिएपछि उनलाई सिसियुमा राखेर उपचार गरीएको थियो। डिस्चार्ज भएपनि उनलाई चिकित्सकहरुले आराम गर्न सुझाव दिएका छन् । डा केसीलाई सोमबार बिहान ४ बजे मनमोहन सेन्टरको आकस्मिक कक्षमा लगिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस रेसुङ्गा टेलिभिजनको वार्षिकोत्सवको अन्तिम तयारी पुरा
आकस्मिक कक्षबाट उनलाई सिसियुमा लगिएको थियो । उनकाे उपचारमा डा. अरुण सायमी र उनकाे टिम संलग्न थिए । स्वास्थ्यखबरबाट